ROHINGYA ARAKANESE REFUGEE COMMITTEE: 10/01/2011 - 11/01/2011
ဦးဟန်ညောင်ဝေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သမ္မတကြီးလည်းဖြစ်၊ ညောင်ရွှေ စော်ဘွားဆက်၏ နောက်ဆုံး စော်ဘွားလည်းဖြစ်သော စော်ဘွားကြီးစပ်ရွှေသိုက်၏ သားတဦးဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာပြီး ၄ လ အကြာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဦးဟန်ညောင်ဝေကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ အခြေခံပညာရေးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင် ပညာ ဆက်လက်ဆည်းပူးကာ ဘွဲ့ရရှိသည်။ ထို့နောက် ကနေဒါနိုင်ငံ McGill University မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ (MBA) ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဦးဟန်ညောင်ဝေ (ဓာတ်ပုံ - Shan Herald Agency for News)
ဦးဟန်ညောင်ဝေသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာပင် ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။ သူသည် Burma Alert လစဉ်သတင်းစာစောင်၏ အယ်ဒီတာ၊ အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ၀န်ကြီးချုပ် ဦးစိန်ဝင်း၏ အကြံပေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ နေ့စဉ် မြန်မာဘာသာအပြင် တိုင်းရင်းသား (၇) ဘာသာဖြင့် သတင်းထုတ်လွှင့်နေသော ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) ၏ စီမံခန့်ခွဲရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး စသည့် တာဝန်များ ယူခဲ့သည်။
၁၉၉၇ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဦးဟန်ညောင်ဝေသည် ဥရောပ မြန်မာရုံး၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရပ်သို့ အသွင်းကူးပြောင်းရာတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ဂျာမန် Friedrich Ebert ဖောင်ဒေးရှင်းတို့က ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်သော စီမံကိန်းတခုဖြစ်သည်။
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးဝန်းကျင်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၏ လက်ရှိအနေအထား၊ တိုင်းပြည်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော အပြောင်းအလဲများအပေါ် နိုင်ငံတကာ၏ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက ဦးဟန်ညောင်ရွှေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
မေး ။ ။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာ တဖက်နဲ့တဖက် အကြိတ်အနယ် ပြိုင်နေကြတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားတဲ့အုပ်စုရယ်၊ ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားတဲ့ ခေါင်းမာတဲ့အုပ်စုရယ်လို့ ရှိနေတယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ဦးဟန်ညောင်ဝေကရော ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတွေက အသာစီးရနေတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီအုပ်စုနှစ်ခုစလုံးက အတိုက်အခံနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းကို ချော့တခါ၊ ခြောက်တလှည့် ပုံစံမျိုးနဲ့ ကစားနေတာလား။
ဖြေ ။ ။ ပြုပြင်ပြောင်းလိုတဲ့ လစ်ဘရယ်အုပ်စုနဲ့ ခေါင်းမာတဲ့အုပ်စုကြား တိုက်ပွဲရယ်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိပါဘူး။ သီအိုရီအရ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အခုအခြေအနေက အဲဒီလိုပုံ ပေါက်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်ကို တချို့အကဲဖြတ်သူတွေက လစ်ဘရယ်တဦးရယ်လို့ မြင်ခဲ့ကြတာပေါ့။ တဖက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်း ခင်ဗျားပြောသလို အကောင်းနဲ့အဆိုး ပုံစံလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူးဗျ။ ကျနော်တို့ကိုယ် ကျနော်တို့လည်း အရူးမလုပ်သင့်ဘူး။ တပ်မတော်က အတိုက်အခံကိုလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ၁၉၆၂ မှာ အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးနုက အခြေအနေကို မထိန်းနိုင်တော့လို့။ ဦးနေ၀င်းက ၁၉၈၈ မှာ ထိန်းမထားနိုင်တော့ တပ်မတော်က တခါ အာဏာထပ်သိမ်းလိုက်တာပဲ။
အဓိကသဘောတရားက ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ တစုံတဦး (တပ်မတော်) က အခြေအနေကို ထိန်းထားနိုင်ရမယ်။ လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့အစိုးရတရပ်နဲ့ ဘေးနားကနေ မားမားရပ်ပေးမယ့် ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရပ် ဖြစ်လာဖို့ပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းထဲကနေ ဖယ်ပေးလိုက်ပြီး ယိုင်နဲ့နဲ့ပါတီ၊ အားပျော့တဲ့ သမ္မတနဲ့ ဒုသမ္မတ၊ ချိနဲ့နဲ့ ပါလီမန်နဲ့ ချိနဲ့နဲ့တပ်မတော်ကို အာဏာလွှဲပေးလိုက်တယ်။ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ဒီအခြေအနေကို ဆက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်အတွင်းကနေ ထိန်းချုပ်ဖို့ သူကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခုကျနော်တို့ မြင်နေကြားနေရတဲ့ သဘောထား ကွဲလွဲချက်တွေဆိုတာ အတွေးအခေါ်ပိုင်းအရ မဟုတ်ဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဖြစ်နေတာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တချို့တွေက ဦးသိန်းစိန်ကို ခေါင်းဆောင်နေရာပေးတာ မကြိုက်ကြဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်နေတာ။
ခိုင်မာတဲ့ အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့အားထုတ်တာ လွန်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ အမေရိကန်လို ဒီမိုကရေစီ အစိုးရများကိုယ်တိုင် အရာရာအားလုံးကို ထိန်းထားချင်တယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် မင်းမဲ့စရိုက် ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ ဆိုတော့ မေးရမှာက ဘယ်သူကို ထိန်းချုပ်ခွင့် ဘယ်လိုပေးမလဲနဲ့ အဲဒီထိန်းချုပ်ခွင့်ကို ဘယ်လိုမျိုး လက်တွေ့ကျင့်သုံးမလဲ ဆိုတာပဲ။ အဲဒီ ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိသူကို လူထုဆန္ဒ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စည်းရုံးဆွဲဆောင်မှုစတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေ ယူမယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝဥဿုံလက်ခံရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို လက်နက်နဲ့ လုပ်ယူမယ်ဆိုတော့ လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တချို့တွေက ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ တရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မွေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်။ အခုသူလုပ်နေတဲ့ နည်းလမ်းတွေအရဆိုရင် တော်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ မတူတဲ့ တခြားခြားနားချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းပြည်တခုအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဦးသိန်းစိန်က မြင်ပုံရတယ်။ သူကိုယ်တိုင်က လွတ်လပ်မျှတသူ လစ်ဘရယ်သမားတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေတခုလုံးကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အစိုးရမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွား (တခြားတိုင်းပြည်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများနဲ့ ယှဉ်၍) ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစိုးရမျိုး သူ့အစိုးရကို ဖြစ်စေချင်တယ်။
သူ့အပြောင်းအလဲတွေ အောင်မြင်မှာလား။ ဒီအတွက်တော့ အဖြေမရှိသေးပါဘူး။ သူ့ရန်ဖက်တွေက သူ့ကို အာဏာကနေ ဖယ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခသုက္ခတွေကို သူ့ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကနေ ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို နားမချနိုင်ဘူးဆိုရင်၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ သူ ငြိမ်းချမ်းရေး မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ အစိုးရက သူ့ရဲ့ ကတိတွေကို အကောင်အထည် မဖော်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက သူ့ရဲ့အားထုတ်ချက်တွေကို လက်မခံဘဲ ဖိအားတွေ ဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင် စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့၊ အဲဒါဆိုရင်တော့ သူကျဆုံးမှာပဲ။
ကျနော်တို့ကိုယ်ကျနော်တို့ မေးရမယ့် မေးခွန်းက တခြားအစားထိုးစရာ ရှိသလား၊ အကယ်၍ သူ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ပိုကောင်းလာမှာလား၊ သူ့နေရာမှာ ဘယ်သူနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာနဲ့ အစားထိုးမလဲ။ ပိုပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ လစ်ဘရယ်ဆန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်မလာမှာတော့ ကျိန်းသေတယ်။ အဖြစ်နိုင်ဆုံး အခြေအနေက တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းလိမ့်မယ်။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကျဆုံးခန်းကို ကြည့်ပြီး နောင်တက်လာမယ့် စစ်အစိုးရက ပိုပြီးတော့ ရှေးရိုးဆန်မယ်၊ ပိုပြီးဖိနှိပ်မယ်၊ လစ်ဘရယ် မဖြစ်တော့ဘူး။
မေး ။ ။ ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ဦးဟန်ညောင်ဝေအနေနဲ့ မြင်တွေ့လိုပါသလဲ။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရော အခုအချိန်မှာ ဘယ်လို အသေးစိတ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တော်တော်များများကိုတော့ လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပြုထားပြီးပါပြီ။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကတော့ တော့်တော့်ကို ရှုပ်ထွေးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီကိစ္စတွေက တခုနဲ့တခု ဆက်စပ်နေလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက် ကျနော်တို့ မျက်နှာလွဲခဲပစ်လုပ်ထားတဲ့၊ ပိုဆိုးလာနေတဲ့ ပြဿနာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်ထင်တာကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ကတိအသစ်တွေ ထပ်ပေးနေမယ့်အစား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပေးပြီးသားကတိတွေကိုပဲ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲက ဘာလဲဆိုတော့ အစိုးရမှာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လုပ်နိုင်စွမ်းအား မရှိနိုင်တာပဲ။ အစိုးရလုပ်နိုင်တာထက် ပိုပြီး မျှော်မှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေက ပိုပြီးတော့ လက်တွေ့နဲ့ ကင်းကွာသွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ဖျက်သိမ်းပစ်တာမျိုး၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကြေညာတာမျိုး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတာမျိုး၊ ပြည်ပက အတိုက်အခံတွေ ပြည်တွင်းပြန်လာနိုင်အောင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတချို့ ချပေးတာမျိုး၊ စာပေစိစစ်ရေး ဥပဒေတွေကို ဖျက်သိမ်းပေးတာမျိုး၊ သတင်းထောက်တွေအတွက် လွတ်လပ်ခွင့် ပိုပေးတာမျိုးအပြင် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေကို ၀င်ခွင့်ပြုတာမျိုးတွေက ရှိနေပြီးသား ဗျူရိုကရေစီကို ထပ်ပြီး အလုပ်မရှုပ်စေတဲ့ ပြုလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေပါ။
မေး ။ ။ တရုတ်ကဆောက်ပေးမယ့် မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်ရေး ယာယီရပ်ဆိုင်းဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တချို့က အမေရိကန်အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ မဟာဗျူဟာ ကျားကွက်လို့ မြင်ကြတယ်။ အာဏာချိန်ခွင်လျှာ ညှိတဲ့သဘောပေါ့။ ဦးဟန်ညောင်ဝေကရော အဲဒီအမြင်ကို သဘောတူလား။ တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကို မြန်မာက တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့အကွက်တခုလို့ တကယ်ရော မှတ်ယူလို့ရပ့ါမလား။ တရုတ်ဖဲချပ်ကို မြန်မာက ထုတ်ကစားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အစစ်အမှန် နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကနေ အသာလေး ရှောင်ထွက်သွားနိုင်သလို၊ အနောက်အုပ်စုနဲ့လည်း မိတ်ဆွေလုပ်နိုင်မယ်လို့ တချို့ အကဲဖြတ်တွေက ပြောနေကြတယ်။ အဲဒါကိုရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒီလုပ်ရပ်ကို လူအထင်ကြီးလောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာတခုနဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့တော့ ကျနော်မယုံကြည်ဘူးဗျ။ အနောက်နိုင်ငံက တချို့လူတွေရဲ့ ဖြစ်လိုတဲ့ဆန္ဒပါ။ ယာယီရပ်ဆိုင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာက သမ္မတဟာ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အကြီးအကဲနေရာမှာ ရှိနေတယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်တဲ့ အရိုက်အရာခေါင်းဆောင်သစ် တယောက်ရှိနေပြီလို့ ပြည်တွင်းကို အသိပေးလိုက်တာပဲ။ ဒီအငြင်းပွားဖွယ် ရေကာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယခင်အချိန်ကရော၊ အခုအချိန်အထိပါ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တရုတ်ကုမ္မဏီအကြား လျှို့ဝှက်ညှိနှိုင်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သဘောတူညီချက်ပါ တချို့အချက်တွေကို ဦးသိန်းစိန် သိပုံမပေါ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ ဒီကိစ္စကြီးက နိုင်ငံတော်ကိစ္စရပ်ကြီးတခု ဖြစ်လာပြီး ဦးသိန်းစိန်ရှာနေတဲ့ ကျည်ဆန်တတောင့် ဖြစ်လာတာပေါ့။ မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စက ကချင်ပြည်သူတွေတင်မကဘဲ မြန်မာတမျိုးသားလုံးနဲ့ပါ သက်ဆိုင်တယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကနေ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို တကယ်တမ်း တည်ဆောက်နိုင်တယ်။ သမ္မတရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျနော့်အနေနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်။ တရုတ်က ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မယ်လို့ ကျနော်တို့ မထင်ပါဘူး။ တရုတ်က သူရဲ့ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခု ပိုက်ဆံ ဆုံးရှုံးလို့ မပျော်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အနိုင်ကျင့်စရာ တိုင်းပြည်တခု ဆုံးရှုံးသွားရတော့မှာကြောင့် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ သမ္မကြီးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာကို ဆက်လက်ရှင်သန်စေချင်တယ်၊ ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာကို သူ့အနေနဲ့ ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။ ရှေ့ဆက်တိုးဖို့အတွက် တခြားနည်းလမ်းလည်း မရှိပါဘူး။ လူတော်တော်များများက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆိုးမြင်နေကြတုန်းပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် ဦးသိန်းစိန်ကတော့ စွန့်စားမှုအများကြီးယူပြီး လူတိုင်းထင်ထားတာထက် ပိုပြီးလုပ်ပြနေတယ်။ အခုအချိန်မှာ ရှိနေတဲ့အန္တရာယ်က ဘာလဲဆိုတော့ လက်ရှိအနေအထားကို ဆက်ထိန်းထားလိုပြီး အပြောင်းအလဲကို မလိုလားတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လူတွေဆီက ရလာနိုင်တဲ့ လက်တုန့်ပြန်ချက်တွေပဲ။
မေး ။ ။ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာထားတဲ့ မူဝါဒက ပျော့ပြောင်းလွန်းတယ်၊ ဘက်ပေါင်းစုံမဟုတ်ဘူး၊ တဖက်တည်းကဖြစ်နေပြီး၊ စစ်အစိုးရနဲ့သူ့ဘက်သားတွေ အလိုကျ လုပ်ပေးနေတဲ့ မူဝါဒနီးပါးတောင် ဖြစ်နေပြီလို့ တချို့ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေ၊ အတိုက်အခံတွေက ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ မူဝါဒအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုးအပြောင်းအလဲ လုပ်သင့်တယ်လို့ ဦးဟန်ညောင်ဝေ မျှော်လင့်ထားပါသလဲ။ တချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ ကန့်သတ်ချက်တွေကို လျှော့ပေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီး ယူဆချက်တွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အကယ်၍ အများက မျှော်လင့်ထားသလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အများကြီး လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးသင့်တဲ့ အချိန်ရောက်ပြီလား။ ပိတ်ဆို့မှုတွေ မရုပ်သိမ်းဘဲနဲ့ရော ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရအနနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အားထုတ်ချက်တွေအပေါ် သူတို့ကလည်း အကောင်းမြင်ပါတယ်ဆိုတာကို နေပြည်တော်ကသိအောင် ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါသလဲ။ သိပ်မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) နဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် (World Bank) တို့က မြန်မာနိုင်ငံကို နည်းပညာနဲ့ ငွေကြေးအကူအညီပေးမယ်လို့ ဦးဟန်ညောင်ဝေ မျှော်လင့်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ လူတယောက်က အားနည်းတယ်ဆိုရင် သူ့ကို အနိုင်ကျင့်မယ့်သူကို အနိုင်လာမကျင့်အောင်လို့ မျက်နှာချိုသွေးနိုင်တယ်။ အဲဒီ အယူအဆက ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမှာတော့ မဆိုသလောက်ပဲ မှန်ပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂ ရပ်တည်မှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ မလိုပါဘူး။ သူ့မှာ မြန်မာထက် ပိုအားသာတဲ့အချက် ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဘာကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်င်ငံကို သွားလေချိုသွေးနေရမှာတုန်း။ အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများလိုပါပဲ၊ ၁၉၉၀ နဲ့ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ အစောပိုင်းနှစ်တွေတုန်းက အတိုက်အခံတွေဆီကနေ မူဝါဒအကြံဉာဏ်တွေ ပေးနိုင်အောင် ဥရောပသမဂ္ဂက လမ်းဖွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်း ၁၅ နှစ် (ရွေးချယ်ခံအစိုးရသက်တမ်း သုံးကြိမ်၊ လေးကြိမ်နှင့် ညီမျှသည်) ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဥရောပသမဂ္ဂကလည်း အတိုက်အခံတွေရဲ့ မူဝါဒ ဘယ်လောက်ထိ အရာရောက်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မေးခွန်းတွေ စမေးလာပါတော့တယ်။ အတိုက်အခံတွေထားတဲ့ မူဝါဒက အဓိကအားဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရေး၊ စစ်အစိုးရကို အထီးကျန်ထားရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက သူ့ဟာသူ ပဋိပက္ခနဲ့ နပမ်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ဥရောပက မတူညီတာတွေကို ပြန်လည် စုစည်းနေတဲ့အချိန်၊ နယ်စပ်မျဉ်းတွေကို ဖွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်၊ ပဋိပက္ခအများစုကို စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနဲ့ ကြိုးစားဖြေရှင်းနေတဲ့အချိန် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂက ဒီမိုကရက်တစ်မူတွေ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သူ့ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒကို စတင်ရေးဆွဲလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ ပြဿနာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ နည်းလမ်းတွေပါ ရှာဖွေလာပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ အရေးယူမှုက ဘက်ပေါင်းစုံမဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မစွပ်စွဲနိုင်ပါဘူး။ မူဝါဒတခုရဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ အချိန်ယူရပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ခံ အစိုးရတွေအားလုံးက ချွင်းချက်မရှိ သဘောတူရပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂတခုလုံးက မြန်မာအတိုက်အခံကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အ၀ သဘောတူတာ မဟုတ်ဘူး၊ အထူးသဖြင့် ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတွေနဲ့ပေါ့။ တချို့က ပြောပြီပေါ့။ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ မူဝါဒက ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်မှာ ပျော့ပျောင်းလွန်းတယ်၊ စစ်အစိုးရကို ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာ တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး ပျော့လွန်းတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ အဖွဲ့ဝင်အစိုးရပေါင်း ၂၇ ခုက သဘောတူသည့်တိုင် ဥရောပသမဂ္ဂ အနေနဲ့ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံမူတွေကို ဘယ်တော့မှ စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥရောပတိုက်သူတိုက်သားတွေက ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို ဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်လို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအပေါ်မှာတော့ ကျနော်တို့ စိတ်ချလက်ချနေလို့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူများကို မဝေဖန်ခင် ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ကိုယ်ကျနော်တို့ မေးသင့်တာက ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကရော ဒီမိုကရေစီ ကျနေပြီလားလို့ပါ။
ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်လက်ပြီး ဆက်ဆံနေမယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ (ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စသဖြင့်) ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေမှာပါ။ သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ အားကောင်းတဲ့ လူထုအခြေပြု လူအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ ပြည်သူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ အလားတူပါပဲ။ ခြစားမှုမရှိတဲ့ ပညာရှင်အရင်းခံ လူထုအကျိုးပြုဝန်ဆောင်မှုတွေ မဟုတ်သရွေ့ ဘယ်အစိုးရကမှ ပြည်သူ့ထံကို မရှိမဖြစ် ၀န်ဆောင်မှုတွေ ဆောင်းကျဉ်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ တကယ်စစ်မှန်တယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂက သဘောကျ ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် သူတို့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖယ်ရှားမှာပဲ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးခြင်းက သူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့် အချက်တွေထဲက တချက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ပိတ်ဆို့မှုတခုတည်းက ဥရောပသမဂ္ဂမူဝါဒရဲ့ အဓိကအရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကအချက်က ဘာလဲဆိုတော့ စစ်မှန်တဲ့ မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ဒီမိုကရေစီကျတဲ့၊ တရားမျှတ ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်လာစေရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေပါပဲ။ တကယ်ပဲ IMF နဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့က မြန်မာနိုင်ငံကို နည်းပညာနဲ့ ငွေကြေးအကူအညီ ပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲက ရှေ့နှစ်မှာဆိုတာ့ ရွေးကောက်ပွဲ မပြီးမချင်း အမေရိကန်ဆီက အများကြီးမျှော်လင့်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက သူတို့အတွက် အရေးတကြီး ဦးစားပေးရမယ့်ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလေ။
မေး ။ ။ အရင်တုန်းက ဦးဟန်ညောင်ဝေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှု မူဝါဒကို ထောက်ခံပါတယ်။ အခုတော့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးဘက်ကို ပိုပြီး ထောက်ခံနေပုံပေါက်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ပြောင်းလဲသွားရတာပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအကြောင်း ဆွေးနွေးရင် လူတွေမှာ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပါလာတတ်တယ်။ အမှားလုပ်တဲ့ လူတွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့် ပြုသင့်သလား၊ အပြစ်ပေးသင့်သလားဆိုပြီး ဆွေးနွေးငြင်းခုံပွဲ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့အတွက် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဆိုတာ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းနှစ် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျနော်တို့ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ – NCGUB၊ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ – NCUB၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ – NLD-LA စသဖြင့်ပေါ့) ဆွေးနွေးတုန်းက ပိတ်ဆို့မှုကို နိုင်ငံရေးလက်နက်တခုအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ တော်တော်များများကလည်း နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မေးစရာရှိတာက အဲဒီရည်မှန်းချက်ကရော အောင်မြင်ခဲ့လားပေါ့။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဆက်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့။ ပိတ်ဆို့မှုကို ကျနော်တို့ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်အစိုးရကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စကားပြောစေချင်လို့ပါ။ အပေးအယူတခုတော့ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေလည်း ပြန်လည်ရရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ အဓိကကတော့ စစ်ရေး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှု (ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး) မလုပ်လို့ကတော့ စစ်တပ်ကို အပေးအယူစားပွဲဆီ ရောက်လာဖို့ ဘယ်တော့မှ လုံလောက်တဲ့ဖိအား ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ထပ်ချမယ်ဆိုရင် အပေါက်ပေါက်နေတဲ့ ပူဖေါင်းကို လေဖြည့်နေသလိုပဲ၊ ဘယ်တော့မှ ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ကျေနပ်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
ပိတ်ဆို့မှုတွေက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းကိုလည်း ချိနဲ့စေတယ်။ ဘယ်သူကမှ ဦးစီးဦးဆောင် မလုပ်ရဲတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံတယ်၊ ဒီမိုကရေစီမကျဘူးဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ခံရမှာစိုးလို့။ အပြောင်းအလဲတွေ ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းကို တခြားနည်းလမ်းတွေမှာ ပိုပြီး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်စေလိုပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ချိနဲ့နေမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အတွက် အသုံးမ၀င်သလို မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်း အကူအညီ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်က ပိတ်ဆို့မှုတွေကို မထောက်ခံတော့တာပါ။ ကျနော်လိုချင်တဲ့အရာတခုကို ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း မရနိုင်တော့တဲ့အခါ ပေးလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တခြားနည်းလမ်းတခုကို ကျနော်တို့ရှာဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ဦးသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စကားပြောနေတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုတစုံတရာ ရနေပုံရပါတယ်။ အပေးအယူလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီးပုံလည်း ရပါတယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ အရင်ကလိုချင်ခဲ့တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ထဲက တချို့သူတွေက ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပိုတောင်းဆိုနေတယ်။ ကျနော်တို့က ဘာလိုချင်တာလဲ။ ကျနော်တို့ ကြုံရသမျှအရာတွေဟာ ကျနော်တို့အတွက် အရေးပါသလား၊ မပါဘူးလားဆိုတာတောင် မသုံးသပ်တော့ဘဲ ကျနော်တို့က ခံစားတတ်လွန်း၊ မကောင်းမြင်လွန်းတာ များနေပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းက ကျနော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲကို ကျနော်တို့ လိုချင်တယ်ဆိုရင် တပ်မတော်က အဲဒီအပြောင်းအလဲတွေကို ဦးဆောင်ရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့မှာ အာဏာရှိလို့ပဲ။ အခု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဦးဆောင်လုပ်နေပြီ။ ဆိုတော့ စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာမယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရလာမှာပါ။
မေး ။ ။ မကြာသေးမီက မြန်မာအစိုးရချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အခုလက်ရှိအစိုးရဟာ အရင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ ဖွယ်ခွာလာပြီလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု အရေးမှာတော့ တိုးတက်လာတာ ကျနော်တို့ ဘာကြောင့်မတွေ့ရသေးတာလဲ။ မြန်မာပြည် အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အုပ်စုတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကလည်း ဆက်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စ သေသေချာချာ ဖြေရှင်းပြီးတဲ့အချိန်အထိ အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ နေပြည်တော်ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွ တုန့်ပြန်တာက ပိုသင့်လျော်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်နဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့စည်းပေးရေး တောင်းဆိုမှုတွေအပေါ်မှာ ဦးဟန်ညောင်ဝေ ဘယ်လို တုန့်ပြန်ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဘာကြောင့် မတိုးတက်သေးသလဲဆိုတာက ဒီပြဿနာတွေဟာ ပိုပြီးနက်နဲတယ်၊ လူတွေ မျှော်လင့်ထားတာထက် အားတွေပိုစိုက်ဖို့လိုတယ်၊ အချိန်ပိုယူဖို့လိုတာကြောင့်ပါ။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေ၊ ဒုက္ခခံစားမှုတွေ ကျော်လွန်ဖို့ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ချမှုတွေ တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အစိုးရစစ်သားတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ဥပေဒအရ ကင်းလွတ်ခွင့်အပြည့်နဲ့ ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ရိုးရိုးသားသား အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို လွှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြန်လည်ကုစားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို သူတို့အနေနဲ့ ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးသွားနိုင်မှာပါ။ နေပြည်တော်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးပါ။ မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စကို ဦးသိန်းစိန် လုပ်သလိုမျိုး သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်မယ်ဆို ပိုပြီးထိရောက်မှာပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒါမှမဟုတ် တခြားနိုင်ငံခြား အစိုးရတွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာထက် သူ့တို့ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်တာက ပိုပြီးထိရောက်မှာပါ။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းအနေနဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးကို ညှိနှိုင်းဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့နေရာမှာ၊ ပြီးတော့ စစ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို စွန့်ခွာတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးအတွက် နည်းပညာအကူအညီနဲ့ အထောက်အပံ့တွေ ပံ့ပိုးတဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဆိုတာ ဖြစ်လာမယ့်ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုကာလက ကျနော်တို့အနေနဲ့ သီအိုရီ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေဆိုတာထက် လက်တွေ့ကျတဲ့ အဆင့်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အကယ်၍ တနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပွင့်လင်းလာပြီဆိုပါတော့။ ပွင့်လင်းလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးဟန်ညောင်ဝေ အနေနဲ့ရော၊ ဦးဟန်ညောင်ဝေရဲ့ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပါ ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လိုပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဥရောပ မြန်မာရုံးက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူငယ်မျိုးဆက်သစ်နဲ့ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ မြှင့်တင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေအကြား နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ လက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအစား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကတဆင့် ပြဿနာတွေကို အတူတကွ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကို လူထုအကြား ပညာပေးခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကျနော်တို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းအကြား ကျနော်တို့ ပေါင်းကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံက ပွင့်လင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့အလုပ်တွေကို ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်လာမှာပါ။ ။
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 10:44 PM No comments: Links to this post
Who are Burma's minority groups?
18 November 2010 Last updated at 10:16 GMT
More than 40% of people living in Burma belong to one of the military-ruled nation's different minority groups. The government recognises eight distinct ethnic groups, with dozens of sub-groups, but refuses to acknowledge others
As the country holds its first elections in 20 years, the BBC profiles some of the main minority groups. Click on each image to find out more.
Update 28 October 2011: The map on this story has been updated to includeasection on the Rakhine people. We have also changed the text to makeadistinction between ethnic groups and minority groups.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 3:02 AM No comments: Links to this post
Rohingya Arakanese Refugees in Bangladesh Demand
The RARC network confirmed that the Rohingya Arakanese Refugees in Bangladesh has put3final demands before repatraition.
1. To ensure full citizenship rights with the name of ethnic Rohingya
2. To ensure equal rights like other ethnic nationalities with full human dignity in line of international human rights mechanism and standard.
3. To give compensation on the loses and damages in their country of origin, including the ensuring the return of their confiscated lands, properties and others.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 2:54 AM No comments: Links to this post
Bar Council moots monitoring mechanism for Malaysian-Myanmar refugee swap
President of the Malaysian Bar, Lim Chee Wee, said today it is crucial both governments prove the swap arrangement will stand up to “international scrutiny”. — file pic
KUALA LUMPUR, Oct 18 — A proper monitoring mechanism is needed for the planned Malaysian-Myanmar refugee swap to ensure transparency and zero human rights violations, the Bar Council said today.
Lim Chee Wee, who is president of the Malaysian Bar, said it is crucial both governments prove the swap arrangement will stand up to “international scrutiny,” and pointed out that both Malaysia and Myanmar have had less than satisfactory track records in the treatment of refugees and asylum seekers.
Home Minister Datuk Seri Hishammuddin Hussein announced yesterday that Malaysia will repatriate detainees of minor immigration crimes from Myanmar back to their country, and vice versa.
“No mention has been made of any monitoring mechanism and whether any determination has been made by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as to whether any of the detainees to be returned isagenuine asylum seeker.
“It remainsafact that Malaysia and Myanmar are both laggards in respect of openness and transparency of governmental action and of ratification of international human rights conventions,” he said inastatement today.
“This immigration detainee swap must also be located within the context of the need forawider and more comprehensive regional mechanism that will allow for freedom of movement of nationals from one Asean member country to work in other member countries in order to address the differing labour demands in this region,” Lim added.
Lim said existing laws in Malaysia regarding the handling of refugees did not suffice, and that they needed to be on par with international legal conventions if the government wanted to see the new swap deal through.
Putrajaya previously entered intoarefugee swap deal with Canberra, dubbed the “Malaysia Solution”, where Australia would send 800 asylum seekers to Malaysia for processing in return for accepting 4,000 refugees from Malaysia.
After repeated attempts, the deal was finally abandoned last week after Australian Prime Minister Julia Gillard’s administration recognised that it lacked the necessary lawmaker support to push the legislation through.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 2:49 AM No comments: Links to this post
M'sia and Myanmar sign exchange detainees deal
Posted on 18 October 2011 - 05:24am
Last updated on 18 October 2011 - 12:22pm
Alyaa Alhadjri and Michelle Chun
Hishammuddin (left) greets U Maung Myint during the latter's working visit to Malaysia, at the Parliament house today. BERNAMA
KUALA LUMPUR (Oct 17, 2011): Malaysia and Myanmar have agreed in principle to exchange detainees, Home Minister Datuk Seri Hishammuddin Hussein announced today, sparking concern among human rights groups.
He said the exchange will help reduce congestion at immigration depots nationwide.
“There are about 1,000 Myanmar nationals detained at immigration depots for various immigration related offences,” he toldanews conference after meeting Myanmar Deputy Foreign Minister U Maung Myint who is onathree-day working visit.
However, the number of Malaysians detained in Myanmar was not made known.
Hishammuddin said about 257,000 Myanmar nationals had been biometrically registered under the government’s 6P amnesty programme for immigrants.
This proposal comes on the heels of the abandoned Malaysia-Australia agreement in July to swap asylum-seekers for refugees.
Under that deal, which was criticised by rights groups, Australia agreed to accept 4,800 UN-approved refugees in exchange for Malaysia hosting 800 asylum-seekers while their applications were being processed.
However, Australian Prime MinisterJulia Gillard ditched the deal last week for fear of not being able to get the law through parliament where she hasaone-seat majority.
The idea to send back Myanmar nationals has raised concern among NGOs which said it would breach human rights as many Myanmars fled their country to escape persecution.
Migrant Care Malaysia director Alex Ong told theSun the situation of the Myanmar nationals was different from that of Indonesians and Bangladeshis.
“The Indonesians and Bangladeshis mostly come to Malaysia as economic migrants, meaning they are seeking wealth andabetter life.
“The majority of Myanmar detainees, however, are seeking political asylum, and are not here for economic reasons. We also have to consider their refugee status,” he said.
Tenaganita director Irene Fernandez, when told of the proposal, expressed shock that such an exchange could take place.
“It is worrying because many of them are actually refugees, but because Malaysia is notasignatory to the 1951 United Nations Convention on Refugees and does not recognise anyone as refugees, they are treated as undocumented migrants,” she said.
Earlier, Hishammuddin said besides helping to reduce congestion at detention depots, the swap will foster closer cooperation between Myanmar and Malaysia in tackling cross-border crimes.
“Malaysia and Myanmar have agreed to set upajoint working committee that will enhance efforts to monitor the movement of migrants between the two countries.
“The committee is expected to be set up by next week,” he said, adding that details on the exchange programme will be revealed after its first meeting.
He said the government had also arrived at similar commitments with Indonesia and Bangladesh which were the top two source countries for migrant workers to Malaysia.
U Maung Myint said arrangements will soon be made to send Myanmar nationals detained at depots back to Myanmar.
On the 6P programme, he said while the move to provide amnesty was welcomed, he had requested for an extension of the registration period, which had ended on Aug 31, for Myanmar workers.
Source: The Sun, Malaysia
Rakhine Attempt to Whitewash Burman King’s Crime
Sun, 2011-10-16 13:24 — editor
Part 4: Rakhine Attempt to Whitewash Burman King’s Crime
Khin Maung Saw providesahighly distorted rendition of the 1784 invasion of Arakan and tries to justify the brutal occupation by the racist and bigot Burman King Bodaw Paya by saying that it was all about reformation of the Buddhist Monk's order. To him, all those who fled were only 50,000. And obviously, to him, these were Rakhines (and no Rohingyas).
Likewise, the Rohingya factor starts with British control of Arakan, esp. as he puts it, after 1886, as if they simply did not exist before the British colonization. He writes, "Arakan was very under-populated at that time. Therefore, the British brought tens of thousands of Chittagonian Bengali Muslims into Arakan. The Arakanese (Rakhaings) have to bear the burdens of these aliens until today. These aliens tried and are still trying to Islamize Arakan (if not the whole of Burma) by all means."
Obviously, suchanarrative belies history, esp. the multi-cultural reality of Arakan during the Mrauk-U dynasty, preceding Bodaw Paya's invasion. As we have noted elsewhere during the 40-year Burmese tyrannical rule (1784-1824) of Arakan, tens of thousands of Arakanese of all faiths were massacred. The conquering Burmese forces demolished mosques, temples and shrines and stole the treasures of Arakan (including the Mahamuni statue). They conscripted and enslaved many, some of whom died out of fatigue and hunger while the living ones were settled at other parts of Burma. Some 20,000 inhabitants were taken as prisoners to Ava. By 1798, Bodaw’s repeated demand for forced slave labor (e.g., to build pagodas) and conscript service and the atrocity of his forces plus the rapacity of his local representatives had forced two-thirds of the inhabitants - Hindu, Muslim and Buddhist alike – to take refuge in Chittagong (Bengal). As noted by Farooque Ahmed,aresearcher at the JNU, just the number of Muslim refugees to Bengal might have been 200,000. What is worse: during the next four decades of Burman colonization of Arakan, everything that was materially and culturally Islamic was meticulously razed to the ground.
According to G.E. Harvey, “Arakan had never been populous, and now it becameadesert; the towns were deserted and overgrown with jungle, and there was nothing more to be seen but ‘utter destruction … morass, pestilence and death.” Khin Maung Saw’s attempt to whitewash the blood-soaked history of his idol, Bodaw Paya, is simply ludicrous, if not criminal and evil. He may like to re-read the historical account of this Buddhist monster, and learn why the Arakanese enthusiastically collaborated with the East India Company to get rid of the Burmans.
As we have noted earlier, the number of Muslims who lived in Mrohaung, the capital, during Mrauk-U kingdom was rather large, probably half the population. It is not difficult to surmise that the Muslim population could have grown to well over 300,000 in 1784 before the Burman invasion of Arakan, just from the Muslim soldiers alone that had settled there after restoring Narameikhla to the throne in 1430.
It is well known from demographic studies within Bangladesh that most of those fleeing refugees – mostly Muslim (and some Hindu) Rohingyas and Rakhine Buddhists - never returned, even when the British allowed such immigration after it had captured Arakan after the first Anglo-Burmese War of 1824-26. They assimilated within Bengal, esp. Chittagong and Chittagong Hill Tract Districts. For example, the ‘Rohai’, comprising nearly half the population in southern Chittagong, trace their origin to Arakan, and as citizens of Bangladesh, have no desire to return to Arakan after more than two centuries. Similarly many Rakhine Buddhists are now citizens of Bangladesh. If the descendants of Arakan who had fled to Chittagong during Bodaw Paya’s invasion of the territory, can become citizens of Bangladesh, K.M. Saw’s claim that the Rohingyas in Arakan are the aliens and that they don’t deserve Burmese citizenship show his utterly repugnant chauvinistic attitude that is at odds with scores of international laws governing basic human rights.
We have also seen throughout history thatapersecuted people, no matter how horrible the living condition is even under the worst of the circumstances minus annihilation, don’t want to leave their ancestral homes. Many would try to endure their sufferings than opt out intoalife of refugee. Thus, it is conceivable that in spite of the Burman savagery, many Arakanese Muslims, Hindus and Buddhists continued to live inside Arakan, and many would move to and fro through the porous borders as they felt either secure or insecure.
We are, therefore, not surprised to read Francis Buchanan’s eye-witness account who wasasurgeon in 1795 to the British Embassy in Ava, the Burmese capital. He wrote about three dialects spoken: “The first is that spoken by the Mohammedans [Muslims], who have long settled in Arakan and who call themselves Roanigya [Rohingya] or native of Arakan.” In stark contrast to the propaganda of the Buddhist racists in today’s Burma, Buchanan clearly identifies the Rohingya people as the natives of Arakan. [K.M. Saw, e.g., tries to mischievously downplay this with his silly explanations, which are so ludicrous that one can clearly see that he was running out of his evil tricks.] How could the Rohingya beaproduct of the British colonization when Britain did not even move into the territory until 1824-6, nearlyaquarter century after Buchanan’s account?
To account for Muslim factor in Arakan, Saw shoots onto his own foot by quoting R.B. Smart, the deputy assistant commissioner of Akyab: “Since1879, immigration has taken place onamuch larger scale, and the descendants of the slaves are resident for the most part in the Kyauktaw and Myohaung [Mrohaung] townships. Maungdaw Township has been overrun by Chittagonian immigrants. Butheedaung is not far behind and new arrivals will be found in almost every part of the district."
Who are these ‘slaves’ that Smart talks about, if they are not the ancestors of today's Rohingyas? So, surely, before 1886, there were already those Kalas in the territory. How did they originate? Did they originate during the British rule, starting at 1824? Surely, not! Can anyone deny the fact that they werealegacy of the Magh-Portuguese piracy, so evident during much of the 17TH and the 18th centuries, when at least 3,000 Bengalis were taken as captives per year, many of whom were forced to work as slaves in Arakan? According to Arthur Phayre, based on the Travelogue of Friar Manrique, the slave population accounted for 15% of the total population of Arakan.
It is not difficult to also understand that under the new political reality of Arakan with the East India Company (EIC) in power, some of the descendants of the Arakanese refugees that had settled in the nearby EIC-controlled Bengal would be allured to settle back in their ancestral land, and that they would prefer to settle in places like Maungdaw and Buthidaung, which are closest to Teknaf, the southern tip of Chittagong in Bengal. That way, if things did not work out for them they could return to Chittagong with much ease.
The new colonizers depended on taxation and land-revenue, and rice export was an important trade in those days. However, with only 740 square miles of the fertile land cultivable in 1871, rice export was accounting for 105,894 Pounds Sterling (less than 10% of the total sea-borne trade of Arakan, amounting to 1.35 million Pounds Sterling).
************ To be continued *********
Part 1: http://www.asiantribune.com/news/2011/09/18/letter-america-muslim-identi...
Part 2: http://www.asiantribune.com/news/2011/09/25/letter-america-muslim-identi...
Part 3: http://www.asiantribune.com/news/2011/10/09/letter-america-muslim-identi...
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 1:28 AM No comments: Links to this post
OIC is succeding for forceful repatriation of Rohingyas to Tyranny
Myanmar to 'take back' Rohingya refugees
Updates foreign office on fresh initiative; newly formed Myanmar govt also agrees to discuss undocumented Rohingyas in Bangladesh
“Although they do not have refugee status, we are not forcing them out of the country on humanitarian ground,” Quayes said, adding that the Myanmar authorities have agreed to discuss the undocumented nationals.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 1:17 AM No comments: Links to this post
Myanmar nationals top asylum seekers’ list
KUALA LUMPUR: Myanmar nationals are the largest number of asylum seekers in Malaysia, the Dewan Rakyat was told Monday.
Minister in the Prime Minister's Department Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz said until Aug, 7,582 of the total 10,850 asylum seekers were Myanmar nationals.
Statistics by United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) in Kuala Lumpur showed there were 94,843 'persons of concern' where 83,993 were refugees and 10,850 were asylum seekers.
"Of the total, 67,145 were men and 27,698 women with Mynamar nationals the majority with 7,582 asylum seekers," he said inawritten reply to Lim Lip Eng (DAP-Segambut) here.
Lim asked about the number of refugees and asylum seekers in Malaysia and laws that guarantee their welfare and safety while in detention.
Nazri said although Malaysia did not sign any agreement on refugees, no illegal immigrants holding UNHCR cards had been arrested on humanitarian grounds.
Malaysia is not signatory to United Nations Convention Relating to The Status of Refugees 1951 and Protocol Relating to The Status of Refugees 1967.
"Malaysia has allowed the refugees to stay here temporarily until they are relocated toathird country," he said.
However, since Malaysia did not sign any agreement on refugees, the government could not guarantee their welfare and safety. - Bernama
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 2:41 AM No comments: Links to this post
By DR ZARNI Wednesday, October 12, 2011
All the “dramatic” developments in Burma, including the release of 6,000-plus prisoners, are, as US Assistant Secretary of State Kurt Campbell put it, certainly welcome. Likewise, the man from the International Crisis Group was singing the praise of Naypyidaw on the BBC World Service News hour with Robin Lustig on 11 Oct .
And yet despite these loud applauses of “changes” in Burma, the Burmese public is finding it very, very difficult to feel hopeful.
Not even Burma’s highly regarded political comedian Zaganar could say he was happy in spite of his new found freedom today when he was released from Myitkyina jail where he was serving 34 years behind bars. He told the Burmese local Eleven Media Group before boarding the Rangoon-bound plane, "Based on my current experiences I dare not think changes are real and big this time either."
Time magazine quoted his remark to the Associate Press: "I am not happy at all, as none of my 14 so-called political prisoner friends from Myitkyina prison are among those freed today".
So, how are we really to understand these much-trumpeted “changes” in Burma?
These changes do not include the change of heart among Burma’s rulers. They are in fact principally related to only two things.
First, the regime's felt need to realign its geopolitical interests.
The military’s uneasiness about its need to rely on China for international protection runs deep. Today China is also Burma’s number one foreign investor, all of it in mega-development, infrastructural and resource extractive projects.
And for Naypyidaw dealing with an increasingly aggressive, powerful and rich Beijing, without the backing of the West and the mainstream Burman public, is like fighting with one hand tied behind the back.
Tangible improvements on the human rights, political and development fronts are part of the price the generals have to pay to balance Beijing's growing influence.
Second, the generals and ex-generals have an acute desire to prove that they are not failures at nation-building, as the bulk of the Burmese public thinks. That’s understandable. The military has had nearly halfacentury to govern, develop and bring about peace and prosperity for all—not just themselves and their families. But they have turned the world’s rice basket intoabasket case.
Hard facts on the ground speak louder than the military’s institutionalized fiction that the senior and junior generals vis-à-vis civilians are brilliant nation-builders. The generals’ Burma is ranked second to last, just ahead of Somalia, on Transparency International's Corruption Index. Public provision of health services exists only in name. There are no social safety nets. Period.
Public education, the largest provider of schooling, at all levels lies in ruin. Ninety-nine percent of university graduates don’t know what BA or BSc stands for, let alone how to spell Bachelor of Arts or Science correctly. And forget the home-grown PhDs.
This extremely low quality of human resources is not the exclusive problem of civilian educational and bureaucratic institutions. The bulk of the 4,000-plus graduates from the Defense Services Academy, the Defense Services Technological Academy and the Defense Services Medical Academy failed entrance examinations at Russian educational institutes where they were sent as “state scholars” under civilian disguise.
There are pockets of communities whose socioeconomic and humanitarian conditions are closer to those of countries in Sub-Saharan Africa than to those of an Asian country about to “take off” developmentally. Many spend more than 70 percent of their meager household income on food alone, while wealth is increasingly concentrated in the hands of the Chinese andahandful of cronies, who in part play the role of portfolio managers for the generals and ex-generals.
The country’s ecology and communities face serious threats to their survival from some mega-development projects such as dam construction—seven on the Irrawaddy, Burma’s Nile, alone—and the two major Chinese gas and oil pipelines and Thailand’s $13 billion Special Economic Zone construction in the country's far south.
Nearly one-million Muslims—Arakanese Muslims and Rohingya—are forced to live in semi-concentration camps in Arakan State. In the midst of economically rising Asia, the country produces the fifth largest refugee population in the world. The Burma Army is still waging military operations against armed ethnic groups such as the Kachin Independence Army and the Karen National Union.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 11:42 PM No comments: Links to this post
We need to narrow this gap,” said Lee.“In Korea we haveavery active civil rights and labor movement and the term human rights was always around but here people often associate the term with struggle, or fighting, or something political.“Even (our country’s) leaders, they think that human rights (can be used as)atool for them to achievealeadership position in Asia.”Lee said Human Asia aims to shift the focus from gleaning international prestige to helping people, avoiding many Asian NGOs often narrow scope that was often “very political and either right wing or left wing.”She added:
“We don’t necessarily represent the whole of Asia but by bringing together other civil society organizations and creatingaforum we can discuss our different concerns.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 3:52 AM No comments: Links to this post
REFUGEE GROUPS CONDEMN GOVERNMENT STALLING MALAYSIA AGREEMENT VOTE
From: Ian Rintoul <irintoul@ozemail.com.au>
Date: 13 October 2011 15:51
Subject: [coordracnsw] STOP STALLING ON MALAYSIA AGREEMENT VOTE
“The Gillard government is achieving nothing by stalling the vote on its Migration Act amendments. They are trying to prolong the inevitable inavain attempt to maintain the blame game and keep the Malaysia Agreement alive – but everyone knows now it is dead in the water. The longer they delay the vote, the sillier they look.
“This is tricky parliamentary politics at its worst. The government has been distracted by the Malaysia Agreement for too long already. The crisis of self harm and attempted suicide in the Australian detention system is not being dealt with,” said Refugee Action
Coalition spokesperson, Ian Rintoul.
“The arbitrary and bureaucratic delays in refugee processing are inflicting increasing misery on asylum seekers languishing in detention. The fact that some people are waiting two years for ASIO security clearances isastraight abuse of the system – innocent
people are being kept in shocking conditions and are being driven crazy by the uncertainty. There are no excuses for such delays.
“Federal Magistrate Court appeals are now being scheduled for February and March next year. The fact that so many negative decisions are being overturned at every level of appeal shows there is something fundamentally wrong with the off-shore processing system.
“The government should face up to the fact that asylum seekers will now be processed in Australia and move on the correct the abuses in their system. The government should bring on the vote or announce that the legislation will not be introduced and that third country processing is finished.
Like third country processing, offshore processing on Christmas Island and mandatory detention are relics of the anti-refugee policies of the Howard era. It is time those policies were killed off too,” said Rintoul.
There will beapro-refugee rally will be held in Sydney on Saturday 15 October, starting at Town Hall. Speakers include: Speakers include: Sarah Hanson-Young (Greens Senator), John Menadue,(Founding Chair, Centre for Policy Development, former head of Department of Immigration and Ethnic Affairs), Linda Scott (NSW co-convener Labor for Refugees), Angeline Loh (Malaysian refugee rights activist), Antony
Loewenstein (independent journalist).
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 3:38 AM No comments: Links to this post
Julina Guo (Constituent liaison, Senate Office)- Michael Eatroff (C.L & Foreign Affairs , State Dept),Nay San Oo , Su Su Lwin
Free Rohingya Campaign (FRC) had an opportunity to brief at U.S Senator Kirsten Gillibrand office in New York City, USA on October 6, 2011 to bring attention to the U.S Government, where Rohingyas have been brutally discrimination by Burmese Regime and current situation of Rohingya refugees in Bangladesh.
Mr. Nay San Oo, Co-founder of FRC and Mrs. Su Su Lwin,a member of FRC are brief about the Rohingya have been invariably subjected to criminal atrocities, torture, inhuman and degrading treatment and punishment, relentless taxation, humiliating restriction on their freedom of movement and residence within the state, prohibition of their right to marry and to foundafamily, restriction of their right to education, right to work and to get access to food and other essentials including medical care Inside Arakan , Burma. Due to above reasons toward Rohingyas have to move out from Burma to the various countries.
Free Rohingya Campaign (FRC)
New York City, United States of America.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 11:04 PM No comments: Links to this post
The Muslim Factor in Arakan
Sun, 2011-10-09 05:16 — editor
Part 3: The Muslim Factor in Arakan
Just as it happened throughout the coastal territories from the Arabian Peninsula to the Barbary Coast and the shores of Gibraltar and Iberian Peninsula (and beyond) via Alexandria, Tripoli and Tunis to the west, and to the shores of Mozambique (originally Musa-bin-Baik) via Zanzibar and Mombasa to the south, and to the lower Gangetic Delta (Bangladesh) and beyond (to the Strait of Malacca) via the Malabar Coast of India to the east, the maritime trade route in the India Ocean in those days (pre-dating European colonization) used to be controlled by the Arab/Persian Muslims.
As they traded they also created pockets of settlements, and interacting with and marrying into the local populace slowly changed the local customs and culture.
Dr. Yegar writes that after the rapid expansion of Islam in the 7th century, “colonies of Muslims, both Arab and Persian, spread all along the sea trade routes… As early as the middle of the 8th century,asizable Muslim concentration could be found in along the southern coast of China, in the commercial ports of southern India, and Southeast Asia…. Merchants brought silk, spices, perfumes, lumber, porcelain, silver and gold articles, precious jewels, jewelry, and so forth from these countries, and some of the trade made its way to Europe.” “Because sailing ships were dependent on monsoon winds and seasons, it was essential for Arabs and other Muslim traders,” writes Yegar, “to set up domiciles in ports that were located in the heart of local communities. Muslim settlements spread rapidly in Asian port cities as Muslim merchants became vital to the economy of the local communities.”
The local inhabitants of Arakan, as noted in the British Burma Gazetteer (1957), had interactions with the so-called Mohammedans – the ‘Moor Arab Muslims’ (merchants/traders), dating at least to the time of Mahataing Sandya (8th century CE).. As to the Muslim settlements in Arakan, the renowned scholars of the early 20th century, Professor Enamul Haq and Abdul Karim Shahitya Visarad wrote in 1935: “The Muslim influence in Roshang [Mrohang: the capital of Arakan during the Mrauk-U dynasty] and modern Chattagram [Chittagong] has been noticeable from ancient times. The Arab traders established trade link with the East Indies in the eighth and ninth century AD. During this time Chittagong, the lone seaport of East India, became the resting place and colony of the Arabs.
We know from the accounts of the ancient Arab travelers and geologists including Sulaiman (living in 851 AD), Abu Jaidul Hasan (contemporary of Sulaiman), Ibnu Khuradba (died 912 AD), Al-Masudi (died 956 AD), Ibnu Howkal (wrote his travelogue in 976 AD), Al-Idrisi (born last half of 11th century) that the Arab traders became active in the area between Arakan and the eastern bank of the Meghna River [in today’s Bangladesh]. We can also learn about this from the Roshang national history: when Roshang King, Maha Taing Chandra (788 – 810 AD) was ruling in the 9th century, some ship wrecked Muslim traders were washed ashore on “Ronbee” or “Ramree” Island. When they were taken to the Arakanese king, the king ordered them to live in the village (countryside) in his country. Other historians also recognized the fact that Islam and its influence developed in Arakan in the 9th and 10th century AD.” [Explanatory notes within the parentheses [ ] are mine. It is worth noting that in the dialect prevalent in Chittagong and Arakan the vocal sounds ‘Ha’ and ‘Sha’ are interchangeable. Thus the words Roshang and Rohang are interchangeable. – H.S.]
R.B. Smart writes in the British Burma Gazetteer as follows: “The local histories relate that in the ninth century several ships were wrecked on Ramree Island and the Mussalman crews sent to Arakan and placed in villages there. They differ but little from the Arakanese except in their religion and in the social customs which their religion directs, in the writing they use Burmese, but amongst themselves employ colloquially the language of their ancestors.”
As noted by renowned historian Professor Abdul Karim,“The important point to be noticed about these shipwrecked Muslims is that they have stuck to their religion, i.e. Islam and Islamic social customs. Though they used Burmese language and also adopted other local customs, they have retained the language of their ancestors (probably with mixture of local words) in dealing among themselves. Another point to be noted is that the Arab shipwrecked Muslims have retained their religion, language and social customs for more thanathousand years.”
These shipwrecked Arab Muslims became the nucleus of the Muslim population of Arakan; later other Muslims from Arabia, Persia and other countries entered into Arakan.
Dr. Yegar says, “Beginning with their arrival in the Bay of Bengal, the earliest Muslim merchant ships also called at the ports of Arakan and Burma proper… Muslim influence in Arakan was of great cultural and political importance. In effect, Arakan was the beachhead for Muslim penetration into other parts of Burma even if it never achieved the same degree of importance it did in Arakan. Asaresult of close land and sea contacts maintained between the two countries, Muslims playedakey role in the history of the Kingdom of Arakan.”
It is no accident that Akyab (today’s Sittwe, the capital of Arakan state of Burma, situated on the south-eastern bank of the Naaf River) isaFarsi name, as are so many other towns and villages named, and how over the centuries most of these local inhabitants along the coastal towns and villages, tired ofacorrupt form of their ancestral region, would convert to Islam. And this happened centuries before Muslim rulers governed some of those territories.
Professor Enamul Haq and Abdul Karim Shahitya Visarad wrote: “The Arabic influence increased to suchalarge extent in Chittagong during mid-10th century AD thatasmall Muslim kingdom was established in this region, and the ruler of the kingdom was called ‘Sultan’. Possibly the area from the east bank of the Meghna River to the Naaf was under this ‘Sultan’. We can know about the presence of this ‘Sultan’ in the Roshang [Mrohang, the capital Arakan during the Mrauk-U dynasty] national history. In 953 AD Roshang King, Sulataing Chandra (951- 957 AD) crossed his border into Bangla (Bengal) and defeated the ‘Thuratan’ (Arakanese corrupt form of Sultan), and asasymbol of victory setupastone victory pillar ataplace called “Chaikta-gong” and returned home at the request of the courtiers and friends. This Chaik-ta-gong was the last border of his victory, since according to Roshang national history – ‘Chaik-ta-gong’ means ‘war should not be raised’. Many surmise that the modem name of Chittagong district originated from Chaik-ta-gong.”
If the story of Arakanese king -- mentioned in its Chronicles -- moving into Chittagong can be believed, in southern Bangladesh, especially in Chittagong, not only was thereaMuslim community present but alsoaMuslim Sultanate ruling there in the 10th century. It may explain why Dr. Than Tun, the former Rector of Mandalay University and Professor of History at the Rangoon University, believed that the kings mentioned in the Inscription might have been Rohingyas, who lived in the eastern part of the Naaf River. He writes, “In the Kyaukza or stone inscription of 1442, it was written that some Muslim kings of Arakan were the friends of king of Ava.”
In their masterpiece, Arakan Rajshavay Bangla Shahitya, Professor Enamul Haq and Abdul Karim Shahitya Visarad continued, “In this way the religion of Islam spread and the Muslim influence slowly extended from the eastern bank of the Meghna to Roshang Kingdom in the 8th and 9th centuries. From the travelogues of the Egyptian traveler to India, Ibn Batuta (14th century AD) and from the accounts of the Portuguese pirates in the 16th century, the influence of the “Moors” or Arabs was waxing till then. So it is evident that long before the Muslim race was established in Bengal in the 13th century, Islam reached to this remote region of Bengal. A conclusion may easily be drawn that after the establishment in Bengal, Islam further spread in the region. That is why Bengali literature was for the first time cultivated among the Muslim of the region. Since the 15th century onwards the Muslims of this region began to engage themselves in the study of Bengali, that is, began to write books in Bengali, of which we have lots of proofs.”
The Muslim saints, the Sufis, who came in hundreds to the shores of Bay of Bengal hadafabulous influence in proselytizing the local inhabitants to Islam. The Arakanese chronicle gives reference to the traveling of Sufis in that country at the time of the king Anawarhta (1044-1077 CE) during Pagan period. Even,aRussian merchant, Athanasius Nitikin, who traveled in the East (1470), mentions regarding activities of some Muslim Sufis of Pegu. The Merchant pictured Pegu as "no inconsiderable port, inhabited by Indian dervishes. The products derived from thence are manik, akhut, kyrpuk, which are sold by the dervishes.” As noted by Dr. Mohammed Ali Chowdhury, these dervishes were Muslims, and probably of Arab descent, and that at that time some Muslims (from nearby Muslim India) had settled in those places.
As it happened throughout history, wherever Muslims went and settled, they were able to proselytize the local people. The simplicity of their faith, views about salvation, egalitarian characteristics and ease of practice, and their ethos - morals, values, dealings, manners and customs -- hadaprofound effect on the local population to gravitate them to the faith of these strangers, the newcomers, away from the degenerative form of their own religion that they had endured. These migrant Muslims married into the local populace and parented children.
In his book, The Essential History of Burma, historian U Kyi writes, “The superior morality of those devout Muslims attracted large number of people towards Islam who embraced it en masse.”
This essential piece of history of the Muslims of the coastal regions of today’s Bangladesh and Arakan state of Burma is simply ignored by chauvinist elements within the Rakhine and Burmese community. They cannot imagine Islam amongst the ordinary masses without rulers being of the same faith. They also forget that Islam from its very inception has beenasimple practical religion, away from the curses of racism, supremacist concepts and caste system that so overwhelmingly dominated the then Buddhist and Hindu culture. While the temples, statues, mandirs and pagodas were built with gold and precious ornaments, and monks and priests held the demigod status enjoying the benefits of the vast material resources that were endowed to them for their upkeep, ordinary people went hungry and poor, and were forced to leadalife of begging and eternal servitude.
It is no accident of history either that vast majority of people in places like Malaysia and Indonesia, where no Muslim army went, would one day become Muslims and abandon their ancestral religions.
The restoration of the deposed king Narameikhla (Mong Saw Mwan) to the throne of Arakan by the Muslim Sultan Jalaluddin Muhammad Shah of Bengal, thus ushering in the Mrauk-U dynasty (1430-1784 CE), isaturning point in the history of Arakan. From this time onward, many of its rulers, indebted to the Muslim Sultan adopted Muslim names (and may even have converted to Islam),apractice that would continue for the next two centuries, until 1638 CE. It is worth noting here that when Narameikhla was dethroned in 1404 CE by the Burman forces, he chose to flee to Muslim Bengal instead of both Buddhist-ruled Tripura and Hindu-ruled territories of India.
When the king Naramikhla reached the capital, he was widely acclaimed by his people. He was aided by two contingents of 50,000 Muslim soldiers (first under General Wali Khan and later under Sandi Khan) many of whom later settled in Arakan. They became his advisers and ministers making sure that the territory was not lost again to the Burmans.
The first thing Naramikhla did after regaining his throne was to transfer the capital from Launggyet to Mrohaung, which in the hands of Bengali poets and people became Roshang (Rohang). Those Muslims established the Sandi Khan Mosque in Mrohaung. Their descendants, as noted by the Bengali poets of the 17th century, held high positions during the Mrauk-U dynasty. During the successive centuries the Muslim population in Arakan grew in large numbers asaresult of inter-marriage, immigration and conversion. [In my travels around the Diaspora communities, I have come across many of the descendants of those soldiers who came and settled in Arakan during Narameikhla’s time. As Anthony Irwin had noted some 70 years ago, these Muslims look quite different than average Bangladeshis; many of them have distinct Arab and Persian touch about them; many even have Mongoloid touch.]
Asavassal state of the Muslim Sultanate to the west, Arakan adopted the superior Muslim culture from the west in its courts, and minted coins with Arabic inscription of the Muslim article of faith (kalima). In this way, Arakan remained subordinate to Bengal until 1531. Interestingly, however, as noted above, its kings continued using Muslim titles even after they were liberated from dependency on the sultans of Bengal. As to the reason behind this practice, Dr. Yegar writes, “[T]hey were influenced by the fact that many of their subjects had become Muslims. Indeed, many Muslims served in prestigious positions in the royal administration despite its being Buddhist.” In Rakhine Maha Razwin (Great History of Arakan), Tha Thun Aung describes mass conversion of many Arakanese to Islam in the 15th and 16th centuries.
Because of her geographical proximity with the south-eastern parts of Bengal, Arakan developed both political and cultural ties with Bengalis. Major Muslim settlements developed along the rivers of Lemru, Mingen, Kaladan, Mayu and Naaf.
Its courts and royalties patronized Bengali literature. Some of the best known classical Bengali poets (Alaol, Dawlat Qazi, Mardan) came from Arakan. Its capital city essentially became the breeding ground for Bengali literature in the 17th century. This Mrauk-U period also came to be known as the ‘Golden Age’ in the history of Arakan.
It is also worth mentioning here that asaresult of rather lax administrative control of Chittagong by the Mughal and Afghan rulers, and the intermittent rebellion by the Sultans of Bengal against the central government in Delhi, the territory was lost to Arakan between 1580 and 1666 CE. So the ties between Chittagong and Arakan were no less striking than those visible today in places like Texas and California with Mexico.
In their masterpiece work "Arakan Rajsabhay Bangala Sahitya,” Abdul Karim Shahitya Visarad and Dr. Enamul Haq wrote, "The way Bangali flourished in the court of the 17th century Arakan, nothing of that sort is found in its [Bengal’s] own soil. It is surprising that during the exile of Bengali language in Arakan, it was greatly appreciated by the Muslim courtiers of the Arakanese kings and the Muslim poets of East Bengal, especially those of the [greater] Chittagong Division.”
These scholars further wrote, “The study of Bengali literature that the Muslim initiated reached perfection under the aegis of the courtiers of the Roshang kings.
It is needless to say that the Kings’ Court of Roshang got filled up with Muslim influence long before this. From the beginning of the 15th century AD the Kings’ Court of Roshang by luck was compelled to heartily receive the Muslim influence…
…. [T]he powerful intrusion of the Muslim influence that penetrated into the Kings’ Court of Roshang in the fifteenth century AD grew all the more in the following centuries. This influence gradually grew so strong that it reached the highest point in the seventeenth century. The Bengali literature in this century shows the full picture of the Muslim influence in the King’s Court of Roshang.”
How can this piece of history about flourishing Bengali literature and the presence of Muslim courtiers and subjects in Arakan be ignored by any objective analyst?
Nor should one forget that when the Mughal Prince Shah Shuja, the Governor of Bengal (1639-59), chose to take asylum in 1660 CE instead of submitting to the authority of Aurangzeb – the new Mughal Emperor, he chose Arakan, which already had many high ranking Muslims serving the king of Arakan. He was accompanied by his family members and retinues, which included hundreds of bodyguards. Upon arrival, however, the Mughal Prince was betrayed by the Arakanese king Sanda Sudamma. While there are competing accounts as to what had ultimately happened to the fate of the Prince, including one account that suggests that Shah Shuja and his family members were treacherously murdered (and another that suggests that he was able to flee to Manipur with some of his retinues), there is little doubt that many of his guards who were attacked savagely by the Maghs of Arakan fled to the nearby jungle. Some of the surviving guards were later made royal archers and bodyguards serving the Arakanese king.
Their descendants, known as the Kamans or Kamanchis (bowman), are to be found settled mostly in Rambree Island. Some of the followers of Shah Shuja escaped the persecution of Maghs and crossed to Burma. The king of Ava settled them in Ramethin, Shwebo, Maydu and Meiktila. Their descendants can be found today at these places.
There was yet another kind of interaction between the Kingdom of Arakan with its eastern neighbor Bengal, beginning in the 17th century, when gaining strength, the kings of Arakan would allow the plunder of Bengal, and Bengali captives – tens of thousands - would be brought to work as slaves in Arakan. When the Portuguese moved to the Bay of Bengal, they were allowed to set up their military posts in Arakan. In return, the Portuguese aided the Rakhine Maghs in their piracy in Bengal, terrorizing its people and harassing the Mughal forces. The joint Magh-Portuguese marauding expeditions into Bengal continued well after they were routed out of Chittagong in 1666 by Shaista Khan, the Mughal Viceroy (Subedar) of Bengal and his son General Bujurg Umid Khan. Taking captives, most of whom were Muslims, forcing them into slavery was an important part of those raids.
Manrique,aPortuguese priest who visited Bengal and Arakan and who spent six years in the Augustinian Church at Dianga (Deang, near Chittagong town) was himselfawitness to such Magh-Portuguese piratical raids. He wrote, “They usually made there general attacks three or four times in the year, irrespective of minor raids which went on most of the year, so that during the five years I spent in the kingdom of Arracan, some eighteen thousand people came to the ports of Dianga and Angarcale.”
As can be seen from Manrique’s account, the number of those captives was not small, and was in excess of 3,000 per year, and continued for well overacentury of piracy. This is further evidenced by the fact that when the Chittagong fort fell into the hands of the Mughals, 10,000 Bengali (both Muslim and Hindu) captives got liberty and they went to their homes. While the Portuguese pirates sold their captives and/or forcibly baptized them into Christianity, the Magh pirates forced theirs into slave labors in the paddy fields along the Kaladan River (the river was named after these Kalas). So these captives also helped in increasing the Muslim population of Arakan. The descendants of these captives mostly reside now in Kyauktaw and Mrohaung Townships of Arakan.
According to historian Professor Abdul Karim, “In the 17th century the Muslims thronged the capital Mrohaung and they were present in the miniature courts of ministers and other great Muslim officers of the kingdom. An idea of their presence is available in the writings of Muslim poets like Alaol who wrote that people from various countries and belonging to various groups came to Arakan to be under the care of Arakanese king. The Portuguese Padre Fray Sebastien Manrique visited Arakan and stayed for some time; he was also present in the coronation ceremony of the Arakanese king held on 23 January 1635. He givesadescription of the coronation procession and says that of the several contingents of army that took part in the coronation, one contingent wholly comprised of Muslim soldiers, let byaMuslim officer called Lashkar Wazir. The leader rode on Iraqi horse, and the contingent comprised of six hundred soldiers. In other contingent, led by Arakanese commanders also there were Muslim soldiers. This evidence of Sebastien Manrique combined with the fact that there were several Muslim ministers in Arakan givesagood picture of the presence of the Muslim in Arakan in the 17th century. The influence of the Muslim officers over the king of Arakan is also evident from the episodes mentioned by Sebastien Manrique.”
The Muslims of Arakan, therefore, are an amalgam of new migrants - Shaikhs, Syeds, Qazis, Mollahs, Alims, Fakirs, Arabs, Rumis (Turks), Moghuls, Pathans - from various parts of the Muslim world that settled during and before the Mrauk-U dynasty, including the captives (the so-called Kolas) brought in from various parts of Bengal and India, and the indigenous Muslims (the children of Bhumiputras who had converted to Islam over the centuries). They created the genesis of what we call the Rohingya Muslims. To put it succinctly: the Rohingya Muslims are the descendants of the indigenous 'Kalas' that either converted or mixed with the Muslim settlers/travelers/Sufis (including Arab/Persian merchants, traders) to the region, the non-returning soldiers who came to restore Narameikhla to the throne of Arakan, the unwilling captives and others that called Arakan their ancestral home. Hence, the Rohingya Muslims are not an ethnic group, which developed from one tribal group affiliation or single racial stock, but are an ethnic group that developed from different stocks of people.
As already demonstrated, the conversion of these indigenous people to Islam has been no different than what has happened throughout history in the last 14 centuries along the coastal regions from Mozambique to Malacca. It should, therefore, come as no surprise that the Rohingyas of Arakan while having some similarities in matters of physical features, and borrowing religious, linguistic and cultural heritage with their neighbors to the west would develop their own distinct identity, albeitahybrid or mosaic one. They are neither Chittagonians nor are they Bengalis [Bangladeshis].
The Rohingya Muslims - the ‘Musulman Arakanese’ - as Anthony Irwin noted, ‘are quite unlike any other product of India or Burma that I have seen.’ Similarly, Moshe Yeager noted, “There is very little common – except common religion – between the Rohingyas of Arakan and the Indian Muslims of Rangoon or Burmese Muslims…”
While their ancestral territory would later be colonized by the Tibeto-Burman Buddhists - the ancestors of today’s Rakhines - whose cultural ties have been towards the east, it is the strength of their group character that the Rohingyas of Arakan were able to retain their linguistic and genealogical ties to the soil. After all, the Rakhines are genetically, culturally and linguistically closer to the Burmans (of Burma). On the other hand, as Dr. Yegar noted ‘the Rohingyas preserved their own heritage from the impact of the Buddhist environment, not only as far as their religion is concerned, but also in … their culture.’
As the children of the indigenous people of Arakan, the Rohingyas have as much right, if not more, as the Rakhine Buddhists, to identify themselves with the name that they prefer to describe them. If the late-coming Tibeto-Burman admixture has no problem in calling itself the Rakhaing of Arakan, no outsider (and surely not its abuser) has any right to either define the Rohingya maliciously or deny the same privilege in self-identifying itself.
To call these indigenous people of Arakan -- who identify themselves as the Rohingyas in Burma – “unwanted guests” is like calling the Native Americans unwanted refugees who had settled in America after the Europeans. As much as no massacre of yesteryears and ghettoization of the Native Americans today in designated American Indian Reservation camps can obliterate their genuine right, place, history and identity, no propaganda and government or non-government sponsored pogroms can erase the rightful identity of the Rohingya people of Burma. They are the children of the soil of Arakan.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 11:31 PM No comments: Links to this post